Ibhizinisi, Ibhizinisi inthanethi
Ukuze ngamunye wethu i-Internet ingaba umthombo engenayo ephezulu futhi uzinzile. Vele ukubheka nabashintshi eziningi wahlanganyela ukuhweba zezimali, izibambiso kanye amasheya ezinkampanini - izinkulungwane zabantu abasebenza nabo, abaphethe ukubhekana naso imali eningi.
Yini okubi nakakhulu? Ngempela akukho! Mhlawumbe unayo ithalenta ukwenza imisebenzi yezimali kanye usebenza umabhalane ehhovisi.
Uma lesi sihloko izithakazelo wena, futhi ungase ufune ngisho ukuzama ngokwami kule ngokoqobo entsha, sinikela ukunakwa kwakho isihloko ezithakazelisayo mayelana platform Trading212. Izibuyekezo zisikisela ukuthi inkampani ingase ibe nesithakazelo, kokubili Wabasaqalayo abahwebi abanolwazi futhi kunamathuba amathemba sina. Futhi kungani kufanele unake ke, uchaze ngezansi. Okwamanje, sichaza lokho luwumgogodla inqubo.
Pho, ungayilawula kanjani ukuqonda ngaphandle kokungabaza, wemali engenayo zakwamanye zangekhulu ukuthengiselana nge izindinganiso ezisekelwe ngesisekelo zokukhwabanisa kwezohwebo. Sikhuluma ukuthenga nokuthengisa. Konke silula: wena ukuthenga noma ukuthengisa ithuluzi ezingeni elilinganiselwe ethile, landela ukunyakaza inkomba, futhi ungabona yimpumelelo kangakanani lokuvumelana.
Uma ukubaluleka ukwanda komkhiqizo, uthola inzuzo uma kwenzeka ukuthola, uma ithuluzi kuba eshibhile, ungenaso okungalungile uma uqala ukulithengisa.
Yilokho. Ngesisekelo umsebenzi oholela kahle emakethe yezimali - yikhono ukuqagela ukuthi ukushintsha exchange rate, igolide, uwoyela noma igesi. Futhi isebenza Trading212. Izibuyekezo abonisa ukuthi lapha main into - isikhathi ukuthola indlela yabo mayelana ukunyakaza ngokwengeziwe inkomba futhi, ngokufanelekile, ukufeza kuthengiselana oyifunayo.
"Forex" noma ongakhetha kanambambili?
Empeleni, kufana nokuthi yokuhweba "Forex". Inzuzo incike izinto kungakanani uke wathenga noma ithengiswe izinsimbi zomculo zezimali. Ekugcineni, inzuzo yakho noma ukulahleka ingahluka kakhulu ngempela.
Kukhona enye - umsebenzi wezandla ongakhetha kanambambili. Le ndlela yokwenza ukuhweba akukhona esihlokweni lanamuhla, Nokho, ngenxa erudition jikelele, kufanele bazazi futhi ngaye. Kukhona inqubo eziningana ukuhweba lula - wena kuphela kudingeka ukucabangela ukuthi yimuphi indlela intengo zizoshintsha, futhi uzothola amaphesenti angu-85-90 we inzuzo kusukela kuthengiselana uma umhlahlo ilungile.
Ochwepheshe abaningi bakholelwa ukuthi kukho zifana lottery kunokuba ukuhweba zezimali. Ngakho-ke, efiswayo "Forex". Umthengisi udumo Trading212, okuyinto libuyekeza siyaphi ukubeka olunye ekufakazisa. Awu, manje sibheke izici ezithile isayithi.
Uma uthi nhlá, umthengisi azihlukile kakhulu kusuka inqwaba okufanayo, sokulamula ku emakethe exchange angaphandle. Le nkampani ine iwebhusayithi enhle, elichaza eminingi isipiliyoni emakethe, banikezwe ulwazi amashumi ezinkulungwane amakhasimende ukuthi zingabantu ephethwe Avus (it is a European inhlangano enkulu yezimali).
Ngokuvamile, i-abadayisi Ngokwesilinganiso, le platform akukona esiyingqayizivele. Into kuphela, kungcono isiteji ezithakazelisayo ukuhweba - engazazi kithi-e-MetaTrader, ngoba izicelo zakhe zenzelwe mobile wokusebenza iOS and Android. Ngakho, Trading212 (izibuyekezo uqinisekise lesi) - umthombo ukuhweba kwi "Forex" emakethe ngokusebenzisa kumadivayisi eselula - Smartphones kanye amaphilisi.
Kanjani ukuqala nokuhweba?
Kusobala ukuthi ukuze uqalise lapha, udinga ukufaka isicelo nomdayisi. Kwenze silula, kuthatha wamamegabhayithi mayelana 35 futhi iyatholakala mahhala ku-Google Play ze lwemibhalo okuqukethwe.
Ngaphandle kweqiniso lokuthi kwabathile udinga ukufaka lolu hlelo kudivayisi yakho, it is Yiqiniso, kudingeka babhalise. Uhlelo ivumela khona ezimbili zama-akhawunti - a ukuqeqeshwa sangempela. Ukuze ukuhlola amandla abo futhi kubhekwe ukuthi uyaqonda futhi unesithakazelo ngidayisa emakethe forex, ungakwazi kalula uqale i-akhawunti ukuqeqeshwa. Kuyinto fast kakhulu, khulula hhayi okuningi ukuhluka abasebenza i-akhawunti yangempela. Okuwukuphela umehluko okuphawulekayo ukuthi awudingi utshalomali ngakhoke ngeke ulethe inzuzo. irekhodi Training wadala ukulingana ayizinkulungwane 10 euro "ukuqeqeshwa."
Imigomo sokwenziwa kwe-akhawunti
Ukuze uqale ngidayisa ngemali langempela, kumele ube uhlobo lwesibili yerekhodi - zangempela. He qamba ezingenalutho, nge ukulinganisela zero. Wena ngokwakho kuyodingeka bakhokhe imali zohwebo Trading212. Indlela ukuhoxisa imali ke sizokutshela. Believe me, lokhu akunzima kangako.
Ngaphandle kweqiniso lokuthi wokuphatha ihlangano yokulalelwa akhawunti ngeke udinga ukubhalisa ulwazi lwabo yangempela contact kusuka uzophinde zidinga ukuqinisekiswa kwabo ngokuthumela scan ipasipoti lezi amakheli indawo ngefomethi ethize. Le nqubo kuyadingeka ukuze ugweme yimuphi umsebenzi zokukhwabanisa kungxenye yakho, kanye ukuhlonza umuntu esikhathini esizayo, ne ukuhoxiswa imali.
imithetho inkonzo wawukwenqabela hhayi Dala ama-akhawunti amaningi.
Thola ulwazi ngalokho kungenzeka zohwebo Trading212.com (izibuyekezo zibonisa ukuthi abantu abaningi, ngisho lokhu bengayi), kufanele sibe ku-website esemthethweni inkampani. Ngokuvamile, kukhona lwemali amathuluzi eziyisishiyagalombili: ngqo "Forex" -ploschadka, uwoyela negesi, igolide, isiliva, amafutha ongahluziwe "Brent", American, isiFulentshi, isiJalimane stock exchange, indices, kanye Ukuhwebelana European. Ngenxa yalokho, siqu kwemali ngazimbili, amasheya kanye exchange (kohlaka lezi zinsimbi) kungaba okuningi, enikeza umsebenzisi nethuba lokuveza imizwa yazo ngezindlela ezahlukene.
Kubalulekile ukucacisa ukuthi wonke la mathuluzi ayatholakala ngezinye izikhathi ezahlukene zosuku. Ngakho-ke, lolu lwazi namanje kucaciswe kusengaphambili.
Ngizothanda futhi ukuthi amagama ambalwa mayelana esibonakalayo hlelo, alinikela inkampani Trading212. Indlela ukuyisebenzisa, bakwazi ukuqonda ngamunye - it has a esibonakalayo kahle elula. Uma wayefisa, uthola kuwo ngenxa yomsebenzi kwamahora ambalwa.
Ngakho, qalisa kuqala thina zanakekelwa isiphakamiso ukuvula i-akhawunti virtual. Uma wenza lokhu, uthola ehhovisi lakhe, lapho uzobona ithebhu "Amathuluzi", "Vula Trades", "ukuthengiselana okulindile" futhi "Izindaba", "Izilungiselelo", "Oxhumene" nokunye. Thina zinesithakazelo ngokuyinhloko "Amathuluzi". Lapha uzobona uhlu lokho kungenziwa adayiswa. Ngaphezu kwalokho, ngokuchofoza iyiphi pair lwemali, uzobona izinkinobho ezimbili ( "Thenga" futhi "Thengisa") kanye imenyu eyehlayo nge inombolo yezinto etholakalayo ukusebenza - 5, 10, 20 nokunye. Ngemuva kokuthi ukhethe inani nesiqondiso sokuhwebelana insimbi, igxile esikrinini izobonisa inkomba lwemali, nangaphezulu - izibalo ecacile inzuzo yakho noma ukulahleka. Ezansi kwesikrini Ubuye izibalo on bangaki abantu (njengoba amaphesenti) Kwenziwa ukuthenga / okuthengwa.
Iqiniso lokuthi lokhu Kulula ukusingatha futhi kulula ukuyiqonda, ukwesekwa ukubuyekezwa, www.trading212.com, ngaphezu lokusebenza enembile Ubuye ezihlukahlukene izinto zokufunda. A touch kancane ngale ndaba.
Isiteji inikeza ukuqeqeshwa khulula kumakhasimende ayo. Kunenkolelo amafomu amabili - umbhalo izinto nemfundiso kohwebo kanye isiqophi izifundo zendlela ukudayisa forex bese inzuzo kuwo, ngalokho ukubheka, indlela yokwenza izibikezelo, nokunye.
Ngemva kokuhlola lokhu kwaziswa, ngisho mfunda-makhwelo ephelele kuyodingeka okungenani iphuzu elithile emakethe futhi kanjani ukuthola ukuhweba enenzuzo "Forex" futhi Trading212. Ezemfundo futhi likuvumela ukufunda amakhono ukuthi kuyoba usizo kuwe esikhathini esizayo, kuhlanganise ukusebenza namanye wabathengi.
Izikhungo uthola nokukhokhwa kwezintela nezimali ngezindlela ezilandelayo: credit card, ukudluliswa, ngosizo ohlelweni lokukhokha PayPal, CashU, UnionPay, DotPay, CarteBleue, SafetyPay, MisterCash futhi DirecteBanking. Njengoba singabona, umsebenzisi we Russian Federation kuyoba elula kakhulu ukuze usebenze nge inkampani ngokusebenzisa ebhange noma i-PayPal. Okunye zezimali mancane langempela, futhi enjalo owaziwa kumasistimu wethu yokukhokha Webmoney noma Yandex, kungamukelwa.
Inani ubuncane for umthamo wemvula kuyinto $ 150 - umbundu adingekayo noma ubani ofuna ukuqala ukuhweba. Ukudonswa angaphansi ngendlela ngalo ku-akhawunti yakho. Uhlelo unomthetho owodwa - izimali zikhokhwa ngendlela efanayo lapha bekene okufakiwe. Ukuhoxiswa iKhomishana ilingana 1 per cent (kuziwa ngqo Trading212). Indlela ukuhoxisa imali, uthola kwi-akhawunti - kukhona inkinobho esihambelanayo.
Izikhungo isibe abahwebi ngempela abadumile emphakathini ngenxa eseyintsha umbono ukuthuthukisa izicelo ezisekelweni mobile. Ngaphezu kwalokho, inkampani entsha, okuyinto ezikahle ukusebenza, enifeza imisebenzi ukuhweba zomculo ezahlukene zezimali. Ngakho-ke, ukubuyekezwa Trading212 Pro (amaklayenti inkampani Ukuhweba) impela eningi.
Abakwazi zingahlukaniswa izigaba ezimbili: abanye bama kwelokuthi inkampani ezithakazelisayo ngokuya nokubambisana, siyafuna ukuthi yithemba elihle kanjani emakethe; abanye bathi bengaqondi ngesisekelo izinto kusayithi Trading212, indlela yokusebenzisa yesikhulumi Ukuhweba futhi yiziphi izimo ukuvula kanye nokuvala ukuhweba zomculo othile. Abanye abasebenzisi baye baphawula ukuthi ukuhweba evela kumadivayisi eselula kuzokuhlupha kakhulu.
Yiqiniso, ekahle yonke inkonzo akukwazi. Kukhona njalo abantu engibathandayo kungcono interface limnandi, elula elula, nalabo abashunyayezwa kungase kubonakale ampofu noma ngandlela-thile iyadida. Lokhu kuboniswa iqiniso ahlukene kanjani Trading212 Pro ukubuyekezwa.
Noma kunjalo, lo msebenzi unelungelo liyokwahlulelwa. Emakethe kuba isikhathi eside, abantu ezifakwa isinxephezelo yibhange, ngakho musa uthemba inkampani azikho izizathu.
Futhi uma ufuna ukuzama ukudayisa lwemali amagugu, bonisa ikhono lazo sihlaziye emakethe futhi ukubikezela izenzakalo ezihlukahlukene ezingase ziphazamise ukusebenza kwezomnotho, kungani ungazami? Phela, ngisho ekuqaleni akhawunti mahhala - lena yinto entsha.
Imikhuba engokomoya yaseMpumalanga: iyini i-mantra yokuphulukisa
Whiskey American (Bourbon) "Meykers Mark": incazelo, ukwakheka, kanye nokubuyekeza